Dhambaal jacayl macaan oo lama iloobaan ah
8 Sadar oo lamid ah waan ku jeclahay misana ka qurux badan
Garowe ( Erayo Jaceyl ) - 8 Sadar oo lamid ah waan ku jeclahay misana ka qurux badan. Hadaba maxay yihiin 8 da sadar? Waxaan maqli jiray...
Waa maxay Jaceyl? - Sidee ku ogaan kartaa in uu jaceyl ku hayo
Waa maxay jaceyl? Sidee ku ogaan kartaa in uu jaceyl ku hayo? Ma jiraa jaceyl dhab ah? Farqi nuucee ah ayaa u dhexeeyo jaceyl dhaba ah...
Baro sida loo qoro Fariimo jaceyl oo cusub 2020
Waxaan horay uga soo hadalnay qormooyin kala duwan kuwaasoo akhristayaasheenu ay u riyaaqeen. Hadii aadan horay u akhrisan hada hoos ka...